RAM - kuyinto ekhethekile uhlobo inkumbulo. It imelela "Finyelela okungahleliwe Memory". RAM - omunye izakhi eziyisisekelo computer. Of umthamo yayo nesivinini incike linani lemisebenti ukuthi kungenziwa run kanyekanye ku-PC yakho noma ikhompyutha ephathekayo.
Ulwazi RAM endaweni izitolo ukuthi kuyadingeka ukuze balondoloze impilo uhlelo ukugijima. Ngakho-ke, le divayisi kuba ipharamitha kubaluleke kakhulu ezifana speed: ushintsho ukwaziswa inqubo ithatha indawo ngokuqhubekayo, uhlelo ngokuvamile oyofika engqondweni, ukubhala nokufunda ukwaziswa. Kanjani ngokushesha ulwazi uyakwazi ushintsho, futhi ezicini eziningi inquma induduzo tinhlelo temisebenti. Uma RAM kuyinto ngesivinini asanele noma ivolumu, zohlelo "ukubopha" futhi "Freeze."
I engavamile eyinhloko RAM - lokhu simo esishubile. Lokhu kusho ukuthi ulwazi olugcinwe kwi-amaseli nje kukhona amandla. Nokulahlekelwa (ngisho short-term) Amandla kabusha lonke ulwazi (ubalekela). Ngakho-RAM - lokhu iyisilondolozi yesikhashana kolwazi lwamanje.
Ukuqeda imithelela ugesi, ezinhlelweni eziningi umsebenzisi babe ngokuzenzakalela ugcine sici ukuthi ngemva kwesikhathi esithile uloba yonke idatha ezidingekayo memory ozinikele wemboni-oluyingozi (ROM). Uma idatha ezidingekayo selulayisheke kusukela ROM ku-RAM. Ukulondoloza ngokuzenzakalelayo - akulona kungenzeka kuphela. Njengomthetho, kukhona ekulondolozeni ophoqelelwe, okuyinto ezinhlelweni ezahlukene lwenteke ngendlela yabo. Ezimweni eziningi, kwenziwe ngesimo isithonjana kubha Command noma izinkinobho kwimenyu.
Ngokuvamile inhlanganisela izinhlobo ezimbili inkumbulo, ezifana RAM ROM, uyayixazulula inkinga yokusingatha futhi isitoreji lonke ulwazi oludingekayo. RAM has a high speed, kodwa likwazi amavolumu amancane oluyingozi. ROM usebenza ngezikhathi kancane, kodwa kuyahluka obunamandla kanye nokwenzeka eside isitoreji.
RAM kuyinto ezinhlobo ezimbili: static kanye ashukumisayo. Dynamic inkumbulo ikuvumela ngokuphindaphindiwe isula ulwazi, kodwa zidinga njalo liyokwazi ukusimama (njalo millisecond 15). SRAM ezitolo eqoshiwe idatha inqobo nje amandla ihlinzekwa, futhi ayidingi ubhalwe kabusha.
Emzimbeni RAM livela njengendlela chipset noma chip amamojuli. Basuke ngokuvamile uxhumeke kwi-ebhodini uhlelo. Zokukhohlwa zingabangelwa izindlela ezihlukene, futhi uma ukhethiwe kubalulekile ukuba banakekele ukuhambisana uhlelo ifakiwe. Ngokuvamile ku ebhokisini, okuyinto wadayiswa izinhlobo mainboard efakwe ohlwini memory ukuthi bangasebenza zalolu hlobo locingo. Yalolu hlobo we-RAM udinga futhi ukhethe best.
Uma ukusebenza izinkinga PC yakho waqala kuphakama, isibonelo, uhlelo eside wezimpahla yiqhwa ngesikhathi ukuhlinzwa, esinye sezizathu - yokuntuleka RAM zokuqalisa izinhlelo eziningi kakhulu. Khishiwe ezimbili nje: Qalisa izinhlelo ezimbalwa ngesikhathi esifanayo, futhi uma le ndlela akusho engavumelani nawe, khona-ke ukuthenga elikhulu wememori.
I-Dishwasher: ukulungiswa ngesandla. Iziphutha eziyisisekelo zomshini wokulahla
League of Legends ukuqondisa Volibir: Ukudlula, izincomo kanye amakhodi
Isisindo 10 ruble izinhlamvu zemali zabashintshi Russian Federation
Kuyini e-mail kanye indlela yokuyisebenzisa